Masteron (propionate Drostanolone) Ny fiantraikany, Dosage, Side effects
/Blog/Masteron Propionate/Masteron (propionate Drostanolone) Ny fiantraikany, Dosage, Side effects
Posted on 03 / 27 / 2019 by Dr. Patrick Young nanoratra tao Masteron Propionate.
Ny zava-drehetra momba ny Masteron (propionate Drostanolone)
1. Inona no atao hoe Masteron Propionate? 2. Mistrone propriere ny antsasaky ny fiainana
3. Masterone manaparitaka ny fampiasana ara-pahasalamana 4. Propulsion propriété Masteron amin'ny antsipiriany
7. Propulsion Masteronon 8. Manana tsimok'aretina i Propagandy
9. Mividy propriété avy amin'ny Masteron 10. Masterone propionate reviews
Inona no atao hoe Masteron Propionate?
Amin'ny teny steroid, misy nyMasteron izay diky (dihydrotestosterone) DHT. Izany dia steroid anabolic izay ao amin'ny endrika fampidirana. Ao amin'ny tsena, dia misy amin'ny endrika roa izay misy Drostanolone Enanthate sy Drostanolone Propionate (521-12-0) Antsoina koa hoe Masto, Mast, ary Mastabol.
Ny dikan-teny Enanthate an'ny Masteron dia fantatra amin'ny anarana hoe Masteron Enanthate raha toa ilay propionate version fantatra amin'ny anarana hoe Masteron Propionate (521-12-0).
Manontany tena ve ianao hoe ahoana no nitrangan'ny zava-mahadomelina voalohany? Ny Syntex no namoaka azy voalohany tamin'ny 1970. Nomena miaraka amin'i Anadrol ny Masteron Propionate saingy tsy afaka navotsotra talohan'ny Anadrol. Ny anaran'ny varotra dia ny Masteron ary nitazona ny lazany ary mbola tia ny maro ankehitriny.
Mistrone propionate ny antsasany fiainana
Masteron Propionate dia manana ny antsasaky ny fiainana 2.5 eo ho eo.
Masterone manaparitaka ny fampiasana ara-pahasalamana
Masteron Propionate fantatra ihany koa amin'ny Proposta Drostanolone dia steroid anabolic androgenic (AAS) izay novolavolaina miaraka amin'ny tanjon'ny fitsaboana amin'ny homamiadana. Taloha dia tsy nanana safidy maro ny mararin'ny homamiadana, izany no iray tamin'ireo fitsaboana nampiasaina. Nandritra ny fitsaboana dia nampiasaina miaraka amin'ny Selective Estrogen Receptor Modulator izy io Tamoxifen. Izy ireo dia afaka nanakana ny fitombon'ny karazana sela homamiadana. Noho izany dia tena nahomby tokoa ny fitondrana ny tsinay izay tsy nandray andraikitra tamin'ny fikarakarana ny palliative.
Nampiasaina ho fitsaboana homamiadana nandritra ny roapolo taona mahery izy io, saingy noho ny soritr'aretina fanesoana dia miteraka izany, tsy dia malaza tahaka izao izy io.
Masteron dia ilaina ihany koa amin'ny fampihenana ny haavon'ny kôlesterôla izay mety miteraka olana ara-pahasalamana lehibe raha avo loatra ny haavony.
Propulsion propriété Masteron amin'ny antsipiriany
Ho an'ny bodybuilder matanjaka iray, ny tadiavina voasambotra dia iray amin'ny tanjona lehibe indrindra. Izany dia mahatonga ny fikarakarana iray amin'ny vatany hitanina mahagaga sy tsara kokoa. Ny haben'ny habeny tsy ampy tsara dia hahatonga anao hibanjina ny tavanao, na dia lehibe aza ny haben'ny hozakao.
Masteron Propionate dia iray amin'ireo kanseran'ny steroids rehefa manapaka. Raha ampiasaina mandritra ny famokarana fivoahana, dia miteraka fahagagana mahavariana izany, ary ity no antony mahatonga ny olona maro hampiasa azy io amin'ny faran'ny toeram-pambolena bozaka satria amin'izao fotoana izao dia efa marefo ny olona iray. Ny fametrahana Masteron iray dia manapaka iray amin'ny fetra sisa tavela amin'ny faran'ny vanim-potoana.
Fanampin'izany, mahatonga ny olona iray ho sarotra kokoa. The Masteron Ny voka-dratsin'ny anti-estrogenic dia mitarika amin'ny fanatsarana ny fijerin'ny olona iray manontolo. Ny vokatr'izany dia hita mibaribary amin'ny bodybuilders izay kely noho ny 10% ny vatana. Ny fotoana manaraka tokony hijerena haingana dia haingana, ny Masteron Propionate no làlana handeha.
Ny hatsaran-toetra dia tsy ampy; Mila manampy tanjaka ianao. Tsy misy zavatra mahafaly kokoa noho ny hoe afaka manao fanatanjahan-tena bebe kokoa noho ny taloha. Mampahatanjaka anao kokoa noho ny nataonao izany. Amin'ny fampitomboana ny herinao, dia azonao atao ny mampitombo ny isan'ny asan'ny fikarakarana ataonao, alao ny vatany ary tanteraho ireo tanjona rehetra izay noheverinao fa tsy ho azonao mihitsy.
Ny iray amin'ireo vokatra Masteron dia ho hitanao fa afaka manangana takelaka lehibe kokoa. Miaraka amin'ny steroid, dia afaka manao fanatanjahan-tena avo lenta ianao. Ireo Nahazo tombony ny Masteron dia tsy vitan'ny tombotsoan'ny mpandidy biriky fa atleta ihany koa. Azony atao ny mihazona kaloria hisakanana ny fihinana raha mbola manohy ny fampiharana azy izy. Manampy azy tsy hahazo lanja bebe kokoa izy amin'ny fotoana ahafahany manome azy hery, fiaretana ary fahasitranana haingana izay tena ilaina amin'ny asany.
Drostanolone Propionate dia iray amin'ireo steroids ampiasaina raha te-hanangom-bolo na dia tsy manome tombony betsaka aza. The Masteron vs Primobolan mitovy ny tombony.
Olona maro no ahitana ny Masteron Prop amin'ny drafitr'izy ireo noho ny fahaverezan'ny fatotra sy ny fiantraikany eo amin'ny estrogenic. Ireo toetra roa ireo dia miantoka fa mbola mitohy mihintsana amin'ny hozatra izy ireo raha mbola eo am-piterahana ny vatana.
Na dia tsy mitovy aza ny fandrosoana, ity steroid ity dia tonga lafatra ho an'ireo izay mikatsaka ny hampihena ny tavy faratampony, manenitra ny hozatra ary manatsara ny heriny.
Ny vinaingitra roa dia nihinana vary varatra, saingy misy fahasamihafana kely. Ny iray amin'ireo endri-pifaneraseran'izy ireo dia ny maha-injectables ary izany dia mampitombo ny lazany amin'ny fiarahamonina bodibolam-borona. Samy manome vokatra mahagaga izy roa ireo, nefa tsy mety hampijaly ny voka-dratsiny.
Ny fahasamihafana dia tonga amin'ny antsasak'izy ireo, ny dosage ary ny heriny. Ny Masteron Enanthate dia vahaolana lava be dia be nefa ny Short Masteron Propionate dia efa voatokana.
Noho izany, Masteron Enanthate dia ampiasaina mandritra ny lavany lava latsaka, izany hoe folo na roa ambin 'ny folo herinandro na mihoatra, ary ny Masteron Propionate dia ampiasaina mandritra ny fotoana fohy izay efatra ka hatramin'ny enina herinandro. Masteron Propionate dia mihetsika haingana ary ny Masteron Enanthate dia mety haka fotoana kely hahitanao ny vokatra.
Ho an'ny Masteron Propionate ny dosage nomena dia ambany lavitra noho ny an'ny Masteron Enanthate. Na izany aza anefa, dia matetika izy io no ampiasaina, satria tena manalavitra ny rafitra ao amin'ny vatany. Ny dosonin'ny Masteron Enanthate dia omena avo roa heny isaky ny herinandro satria miadana izy ary mijanona ao amin'ny vatana mandritra ny fotoana maharitra.
Manana ny antsasaky ny fiainana mandritra ny folo andro ny Masterant Enanthate, fa ny propionate dia 2.5. Noho izany, efa ela ny Masteron Enanthate no mibaribary eo amin'ny vatana raha ampitahaina amin'ny Masteron Propionate.
Ny fahatakarana ny dosion propionate Masteron dia zava-dehibe satria manakana anao tsy hahita olana izay mety hahatratra anao raha tsy ampiasainao izany araka ny tokony ho izy. Ny fahalalana lalindalina ao amin'ny dosage propionateMasteron dia hanampy anao koa hanapa-kevitra hoe inona no vola azonao mba hahazoana tombontsoa lehibe amin'ny Masteron.
Ny dosage Standard Masteron ho an'ny lehilahy lehibe dia matetika 300-400mg isan-kerinandro. Midika izany fa mila manana onjampeo 100mg isan'andro ianao mandritra ny enina ka hatramin'ny valo herinandro. Ny herinandro ka hatramin'ny valo herinandro dia tsy midika fa ny totalin'ny Cycosis Masteron, fa ny vanim-potoanan'ny olona maro no tia mandray anjara amin'ny ampahany Masteron stack.
Ny olona sasany dia tia manaparitaka ny doka ho tsindrin-tsakafo isan'andro, na dia tsy midika aza izany hoe tsy misy dikany amin'ny doka hafa rehetra izy ireo. Raha toa ka mampiasa ny Drostanolone Enanthate ianao, dia ampy iray na roa isaky ny herinandro ampy.
Ho an'ny vehivavy izay mampiasa ity medikaly ity ho an'ny fitsaboana homamiadana amin'ny tazo, dia manome dosie ny 100mg, intelo isan-kerinandro isaky ny valo ka hatramin'ny roampolo isam-bolana. Mety hitarika amin'ny soritr'aretina fanafody izy io, nefa mendrika izany.
Ho an'ny atleta izay te-hanaparitaka ny asany, dia mihoatra noho ny ampy ny herinandro 50mg rehefa nalaina nandritra ny efatra ka hatramin'ny enina herinandro. Rehefa manapa-kevitra ny hanomboka hampiasa izany zava-mahadomelina izany ianao, dia tsara ny manomboka amin'ny dosage ambany mba hitsapana ny fandeferana. Ny vehivavy dia afaka manatona ny 100mg raha avela halefa any amin'ny vatany ilay fanafody. Ny dosion Masteron mihoatra ny 100mg isan-kerinandro mandritra ny herinandro maherin'ny efatra ka hatramin'ny enina dia mety hahatonga ny olona hijaly amin'ny soritr'aretina.
Ny Masteron dia azo ampiasaina irery na mifangaro miaraka amin'ny steroidre hafa ao amin'ny cycles Masteron. Miankina amin'ny soa ho an'ny Masteron izay tianao hotratrarina. Mety ho be dia be izany na tsiranoka maivana. Manam-pahaizana tsara indrindra i Masteron rehefa ampiasaina amin'ny famaranana faribolam-pandrosoana izay ny tanjon'ilay mpampiasa dia ny manary matavy ary mampitombo ny famaritana ny hozany. Ity dia tsindrimandry ny mety ho an'ny Cycosis Masteron.
Eto dia ny Masteron Enanthate dia ampiasaina noho ny lafiny tsotra, fa maro karazana mpikaroka no mitady ao amin'ny steroids androgenic / anabolic (AAS). Ny tombotsoa amin'ny fampiasana ny Masteron Enanthate dia ny manome toerana malalaka amin'ny sehatra indraindray ary dia mifanaraka tsara amin'ny testosterone Enanthate.
Amin'ity tranga ity, ny iray dia tokony handray ny Testosterone Enanthate amin'ny dosage amin'ny 300-500mg isan-kerinandro. Azonao ampiasaina ny dosage izay tsapanao fa miasa tsara indrindra ho anao ary mety hilefitra ny vatanao. Ny tena antony mahatonga an'io Cycosis Masteron io dia ny fandraisana andraikitra sy ny fitsapana ny vokatra Masteron. Koa satria manana fiantraikany mahasitrana aromatasy i Masteron, dia tsy ilaina ampiasaina miaraka amin'ny inhibitor aromatase hafa. Na izany aza, ny vokatr'izay tsy miteraka dia tsy toy ny matanjaka, ary raha toa ka mampiasa arifomba marobe maromaro ianao ao anaty pila. Tsy mety miasa ny Masteron, ary mila mampiasa fitaovana mahery kokoa ianao. Indro misy ohatra mason'ny Masterton Cycle;
Period- Herinandro roa
Masteron (Drostanolone Enanthate) amin'ny 400mg isan-kerinandro
Testosterone Enanthate amin'ny 300-500mg isan-kerinandro.
Cycle Masteron Intermediate
Ity tsingerina ity dia mikendry ny fahazoana masirasira ary koa ny fihenan'ny vatana. Manamaivana ny hozany izany amin'ny fotoana iray ihany koa izy io na manome fahavoazana matavy na tombony amin'ny hozatra miaraka amin'ny tombom-barotra faran'izay kely ary tsy misy fitehirizana rano. Na izany aza, mba hahatratrarana izany dia tsy maintsy mampiasa izany ianao miaraka amin'ny sakafo izay afaka manampy anao hahatsapa ireo vokatra ireo.
Testosterone dia ampiasaina amin'ny dosage amin'ny 100mg isan-kerinandro amin'ny Testosterone Eropement Therapy. Ny anton'izany dia ny fanoherana ny fanafoanana ny famokarana voajanahary avy amin'ny testosterone anabolika ao anatin'io fiaramanidina io, ka mahatonga azy io ho toy ny fiasa amin'ny ankapobeny mba hanohizan'ny asam-pitandremana ny vatany.
Ny dosage ambany amin'ny testosterone koa dia manondro ny fofona mety hitranga; Noho izany dia tsy ilaina ny fampiasana tsindrona aromatase. Ny fampiasana ny Masteron sy ny Anavar dia manome iray ho an'ny fahasalamana sarotra na amin'ny fisakanana na amin'ny fahazoana masira mena raha tsy voan'ny aretina.
Masteron (Drostanolone Propionate) 100mg isaky ny andro hafa na weekly 400mg
Testosterone Propionate amin'ny 100mg isan-kerinandro na 25mg isaky ny andro.
Anavar amin'ny 50-70mg isan'andro
Fampitomboana Masteron Cycle
Izy io no fihodinan'ny Masteron mahery indrindra izay ny fiantraikany amin'ny fanasitranana ny vatan'olombelona sy ny famonoana ary mbola manome ny tanjaka tena ilaina ao aminy mba hanamorana ny fatrany na ny fahazoana tazomina. Mitovy amin'ny fiovan'ny toetr'andro ny zava-drehetra, ary ny hany tokana dia ny fisian'ny toe-javatra Trenbolone.
Ny mpanao biriky dia mitaraina momba ny tombontsoa azo avy amin'ny Masteron dia manome azy ireo ny maro amin'izy ireo hahatsapa ny fiovana mibaribary eo amin'ny vatany. Ny tombony ho an'ny Masteron dia mahazo tsaratsara kokoa raha ampiasaina miaraka amin'ny sakafo mahasalama ary ny fandaharam-pampianarana izay mifanaraka amin'ny vokatra manaraka. Trenbolone dia mahery ary tsy mahasalotra ary miaraka amin'i Masteron; Manome vokatra tsara izy ireo.
Period- herinandro 10
Masterone (Proposta Drostanolone) amin'ny 400mg isan-kerinandro / Drostanolone Propionate 100mgisaky ny andro hafa.
Testosterone Propionate amin'ny 100mg isan-kerinandro na 25mg isan'andro
Trenbolone Acetate 400mg isan-kerinandro na 100mg isaky ny andro
Manan-tsindrim-peo ny Masteron propionate
Na dia eo aza ny vokatr'ireo fanafihan'i Masterson, dia azo lazaina ho mendri-piderana io fanafody io. Ao amin'ny vehivavy dia voalaza fa miteraka fanafody fanindronana, fepetra azo ampiasaina amin'ny fampiasana ny planina tsara. Ireto ny vokatr'ilay Masteron ao amin'ny sokajiny tsirairay;
Ny sasany amin'ireo effects of the Masteron dia androgenic. Anisan'izy ireo ny fitomboan'ny volo, refin-, ary ny fahaverezan'ny volony haingana amin'ireo izay manelingelina ny fomban'ny lahy. Ao amin'ny vehivavy, ny soritr'aretina virilization toy ny fanalefahana ny feo, ny fanitarana ny clitoral sy ny fitomboan'ny volo.
Ho hitanao anefa fa misy ny soritr'aretina fanesoana rehefa misy dosie avo be ny Masteron, ohatra hoe rehefa voan'ny kanseran'ny nono. Miaraka amin'ny doka kely ambany kely, dia tsy voatery hijaly amin'ireo vokatr'ireo Masterson ireo ianao. Raha mbola mitohy izy ireo dia atsaharo ny fampiasana ny Masteron, ary tsy hanjavona ny soritr'aretina.
Masteron dia mety hisy fiantraikany amin'ny kolesterola amin'ny fomba sasany. Mety ho amin'ny fihenan'ny koloroola HDL na ny fihenan'ny koloroola LDL izany. Nisy ihany koa ny fiantraikany ratsy amin'ny fiakaran'ny tosidra efa voalaza.
Miaraka amin'izany, ao an-tsaina dia ilaina ny fitantanana cholesterol mandritra izany fitsaboana izany. Ankoatra izany, raha manana toetry ny efa eo aloha ianao eo amin'ny kolesterola avo, dia tsy azo antoka ho anao io fanafody io. Raha tsy mijaly ianao, dia ataovy izay hahatonga anao hihazona kolesterola fihavanana. Ny dikan'izany dia ny fihinanana sakafo misy alika omega maimbo be dia be ary koa ny fandraisana anjara amin'ny hetsika kardiahovara.
Ny vaovao tsara dia Masteron Tsy hepatotoxic anabolic steroid androgenic ary tsy hampisy fahasimbana ny aty aminao. Tsy ilaina ny manahy momba ny aty tsy fahombiazana rehefa mandeha Masteron fitsaboana.
Ny famonoana ny tsimokaretina Testosterone dia iray amin'ireo vokatra fanampiny amin'ny Masteron. manana low testosterone Ao amin'ny vatana dia tsy vitan'ny tsy mahasalama ihany, fa mety hahatonga anao hijaly amin'ny toe-javatra samihafa. Mba hanoherana izany, mila mandray testosterone ianao mba hahazoana antoka fa tsy manana olana ianao.
Aorian'ny fivoaran'ny Masteron, dia zava-dehibe aminao ny manao PCT izay manampy amin'ny fampihenana ny fahasitranana. Vokatr'izany, ny famokarana testosterone voajanahary dia hiverina amin'ny ara-dalàna mandritra ny fotoana fohy.
Ny fiarovana amin'ny tovovavy sy ny fitehirizana rano dia misy ny vokatra hafa atahoran'ny olona rehefa mampiasa steroids izy ireo. Soa ihany fa tsy misy ny fiantraikany eo amin'ny estrogenika amin'ny Masteron satria tsy misy ny progestin. Midika koa izany fa ny fiakaran'ny tosi-drà izay mety ho vokatry ny rano loatra dia tsy hisalasala amin'ny fampiasana ny Masteron.
Noho ity steroid ity dia tsy mila mampiasa anti-estrogen ianao. Na izany aza, arakaraka ny tsingerin'ny Masteron na stack ianao dia mety mila anti-estrogen.
Mividy propriété avy amin'ny Masteron
Ny bodybuilder na ny atleta tsirairay dia mila mampiasa ny propionate Masterson, fara fahakeliny indray mandeha amin'ny asany. Ary koa, ireo izay mila izany Masteron prop Ho an'ny tanjona medikaly dia mety hanontany tena hoe aiza no hividianana izany.
Fotoana vitsy taorian'izay dia tsy safidy loatra izany. Ho an'ireo mpanao biriky, dia mila manatona ilay lehilahy goavam-be ao amin'ny gym ary mangataka azy ireo hiantsoana azy. Ireo izay mila ny fanafody dia mety hanana fifampiresahana amin'ny namana ihany koa ary mangataka ny fivarotana tsara indrindra hividianana azy ary manantena ny tsara indrindra. Amin'izao andro izao dia hafa ny zavatra. Tsy voatery hikaroka fivarotana ara-batana ny olona mba hividy izay tiany. Misy fomba hafa; mividy Internet.
Na dia mety tsy hijery ny aterineto aza ny sasany, dia ny toerana tsara indrindra azonao amidy ny Masteron. Ity dia lalana azo tsidihina kokoa sy tsara lavitra izay ahafahanao mividy propriété avy amin'ny Masteron.
Eto ianao dia afaka mamaky ny fanadihadihana, ny faran'ny tsara indrindra, ary ny fahadisoana nataon'ireo olona tamin'ny lasa tao amin'ny trano fonenanao, ny birao, sns. Na aiza na aiza toerana misy anao, dia azo alefa any amin'ny toerana mahafinaritra anao ny vokatra. Na tsara kokoa aza ny hahazoanao mividy ary mandray ny sanda miaraka amin'ny anarana tsy misy anarana. Tsy voatery ho fantatry ny rehetra ny zavatra ataonao.
Mazava ho azy fa tsy lavorary amin'ny rehetra ny fividianana an-tserasera. Tsy azonao antoka tanteraka mihitsy fa hahazo ny vokatrao ianao rehefa avy nandoa vola. Ankoatr'izany dia mety tsy ho azonao antoka hoe rahoviana no handefa anao izany. Ny zava-tsarobidy dia ireo olana rehetra ireo no azo alaina. Ny ilainao hatao dia ny hahazo loharanom-piraisana azo itokisana, ary tsy tokony hanahy momba ny lamina napetrakao ianao.
AASraw no toerana tsara indrindra ahafahanao mividy propriété Masteron. Manolotra Masterton azo antoka izahay amin'ny vidiny amin'ny vidin'ny Masteron mora, ary haingana ny entanay. Ankoatr'izany, ny Masteron dia manana kalitao avo. Tsy vitan'ny hoe manolotra anao amin'ny fandrosoana tsara indrindra amin'ny Masteron izy fa hitondra anao koa ny fotoana fohy indrindra hahitanao ny valiny. Mieritreritra momba ny fahasalamanao izahay, ary azonao antoka fa ny safidin'ny Masteron dia azo antoka sy mahomby. Get Masteron propionate avy amintsika androany ary tsikaritray ny vokatra mahavariana Masteron amin'ny fotoana fohy indrindra.
Ny Propionate Drostanolone dia afaka manatsara ny herin'ny hery iray manontolo ary manome anao ny tombony izay efa tadiavinao foana. Ho hitanao fa ny Masteron aloha sy aorian'ny vokatra avy amin'ny mpampiasa dia tontolo roa miavaka. Ireto ny sasany amin'ireo fanehoan-kevitra avy amin'ny olona nampiasa azy tamin'ny lasa;
Hoy i Chen, "Nandany fotoana be dia be noeritreretiko ny tokony hampiasako ny mionona. Nahazo ny hozatra lehibe aho, saingy tsy hita taratra izy ireo raha tiako izy ireo. Toa matavy be dia be no nanarona azy ireo. Taorian'ny fikarohana be dia be dia be dia be no nahitako ny Masteron Propionate izay noderain'ny olona maro. Anisan'ireo kôdômbia maro ampiasaina amin'ny famongorana ity iray ity dia nitsangana, ary nilaza ny tenako aho, maninona moa raha manandrana azy io? Nandidy azy io aho ary nampiditra azy io tamin'ny famaranana. Tao anatin'ny efa-bolana, dia efa nanomboka nanamarika ny fahasamihafana aho. Tamin'ny fotoana nahavitako ilay fiovan'ny toetrandro, dia sahiran-tsaina mafy ny vatako. Ny masoko dia hita fa metatra lavitra. Ny zava-tsarobidy dia ny tsy fahampihako ny hozako. Mientam-po amin'ny Masteron Prop aho ary manoro azy ny olona maniry ny hanana vatana lehibe. "
Hoy i Zhang: "Efa vitako hatramin'ny enina herinandro maromaro aho, ary faly be i Masteron. Ity steroid ity no nahitako marefo, ary hitako avokoa ny mpiara-miasa amiko rehetra tao amin'ny gym. Mbola manontany ahy foana izy ireo hoe inona no ampiasako mba hahazoana valiny mahatalanjona. Ho an'ny valo herinandro dia tsy nahatsapa ny fiantraikany ratsy hafa aho. Izy io no mahatonga ny steroid tsara indrindra nampiasaiko hatramin'izao. Afaka matoky ny famerenana amin'ny Masteron ianao, ary handray vokatra tsara ianao. Io steroid io no tsara indrindra. "
Ah Kum miteny hoe, "Amin'ny maha-atleta ahy dia mijaly noho ny tsy fahampian'ny tanjaka aho noho ny tsy fisian'ny tsiranoka betsaka amin'ny sakafo. Indraindray aho afaka nandeha an-tongotra ary tsy tonga mihitsy aza. Azonao atao ny milaza ny fomba mampivadibadika izany rehefa manana fifaninanana fifaninanana ianao ao anatin'ny iray volana ary mampihetsi-po anao manakiana anao. Nisy namana iray nanolo-tena an'i Masteron Propionate noho ny fahombiazany tamin'ny famenoana hery. Nianarako ihany koa fa tsy azo trandrahana mandritra ny fitsapana doping noho ny halaviran-tsavony fohy. Hatreto dia nanome ahy ny hery rehetra nilaiko izy. Afaka mampiasa ny andro manontolo aho nefa tsy mila miala sasatra toy ny taloha. Nanome tombony bebe kokoa noho ny nantenaiko izy ary hampiasa azy io raha mbola manenjika ny hazakazaka rehetra aho. Tena mampidi-doza izany. "
Hoy i Chunhua: "Ny fametraham-pialana an'i Masteron Propionate no tena zava-dehibe amin'ny famelomana azy, ary dia misaotra azy mandrakizay aho. Nataoko tao amin'ny paoziko izany satria nanana fifaninanana famolavolana teny an-jorony aho ary izay rehetra azoko lazaina dia hoe izy no mpandresy. Ny olona sasany dia manipy fanesoana momba izany, saingy ny tsiambaratelo dia mahazo ny hatsaran'ny Masteron amin'ny vidiny. Efa nividy azy io hatrany AASraw aho ary tsy nanana olana tamin'ny fahendreny. Ankoatra izany dia nahazo ny vidin'ny Masterson tsara indrindra azonao amidy eny an-tsena izy ireo. Miantehitra aho ary afaka manantena aho fa hivoaka ny tsara indrindra. Nokolokoloina tamin'ny tavy izy io, tsy nanelingelina ahy noho ny fiantraikany mahery vaika hafa. Izaho dia voafatotra mandrakizay ary handeha ho an'ny Masteron Propionate. "
Hoy i Kum: "Nanampy ny reniko marary hiady amin'ny homamiadana io fanafody io. Aorian'ny fandaniana be loatra amin'ny chimiothérapie sy ny fijaliana vokatry ny voka-dratsiny vokatr'izany dia afaka mahita ny hazavana isika any amin'ny faran'ny tonelina. Izany no safidy tsara indrindra raha tsapanao fa voan'ny kanseran'ny nono ianao. "
Fanatanjahana sy fanovàn'ny olombelona: Famaritana ny fahavetavetana sy ny mety ho atao ..., Diana Vaamonde, Stefan S du Plessis, Ashok Agarwal, pejy 230
Anabolic Edge: Tsiambaratelo ho an'ity volavolana fanampiny ity, Phil Embleton, Gerard Thorne, Robert Kennedy Publishing, pejy 18
Anabolika, William Llewellyn, pejy 33
Mividiana vovoka MASONA ho an'ny bodybuilding: 6 zava-misy tokony ho fantatrao !!!
Ny Steroids Strongest Oral Methasterone (Superdrol) Prohormone The Masteron Enanthate The Longer Acting And Steroid Anabolic Steroid (AAS)